Waftigii R/wasaare Erdogan oo soo gabagabeeyey booqasho ay ku tageen Muqdisho. – Radio Daljir
Waftigii R/wasaare Erdogan oo soo gabagabeeyey booqasho ay ku tageen Muqdisho.
Agoosto 20, 2011 12:00 b 0
Muqdisho, Aug 19 – Wafti heer sare ah oo uu hagaaminayey R/wasaaraha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan, uuna weheliyo wasiirka arrimaha dibedda & marwada R/wasaaraha ayaa booqasho maalin ah ku tagay magaalada Muqdisho, booqdayna mid ka mid ah xeryaha barakacayaasha ee Badbaado.
R/wasaare Erdogan ayaa kulamo la qaatay madaxda dawlada federaalka ah, kala hadlay saamaynta abaaraha, sheegayna in ay dawladiisu gacan ka gaysan doonto gurmadka abaaraha, iyo dib u dhiska Muqdisho.
R/wasaare Erdogan ayaa sidoo kale sheegay in dalka Turkigu uu safaarad ka furan doono Muqdisho.
M/weyne Shariif, R/wasaare Gaas, iyo afhayeen Shariif Xasan ayaa uu uga xog waramay waftiga R/wasaare Erdogan saamaynta abaaraha iyo xaalada amni ee Muqdisho.
Waxaa xusid mudan in M/weynaha Jibuuti uu isla usbuucan booqday Muqdisho; wasiirka arrimaha dibedda ee Iran ayaa isna dhawaan booqday Muqdisho.
Booqashooyinka madaxda caalamka ayaa la xiriirta ka bixitaanka Al-shabaab ee Muqdisho usbuuc ka hor.
Wafti uu hoggaaminayo R/wasaaraha Turkiga oo Muqdisho ka degay, booqdayna xeryaha barakacayaasha.
Muqdisho, Aug 19 – Wafti ballaaran oo uu horkacyo R/wasaaraha Turkiga ayaa maanta ka degay magaalada Muqdisho kuwaasi oo dhawrkii maalmood ee ugu dambeeyey la filayey imaatinkooda, loona diyaar garoobayey soo dhaweyntooda.
R/wasaare Recep Tayyip Erdogan, oo ay socdaalkiisa ku weheliyeen afadiisada, wasiirrada arrimaha dibadda iyo caafimaadka iyo sidoo kale koox dhakhaatiir ah ayaa si baaxadleh loogu soo dhaweeyey garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde International Airport, waxaana soo dhaweynta ka qaybgalay madaxda sar sare ee dawladda sida m/weynaha iyo R/wasaaraha.
Soodhaweynta R/wasaaraha, waxaa ka qaybgalay kumanaan dadweyne ah oo ruxayey Calanka Turkiga, caleemo-qoyan iyo boorar lagu xardhay sawirrada R/wasaare Recep Tayyip Erdogan, waxaa uu garoonka dhexdiisa salaan-sharaf uga qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM, iyadoona darbiyada garoonka iyo daaqadaha baabuurtii lagu soo dhaweeyeyna lagu dhajiyey sawirradiisa.
R/wasaaruhu waxaa uu soo dhaweyn kaddib kormeer ku tagay isaga iyo waftigiisu xerayaha ay deggan yihiin dadka barakacayaasha ah ee ku dhaqan magaalada Muqdisho gaar ahaanna xeryaha Badbaado iyo Rajo ah oo ah xeryo ay yagleeshay dawladda federaalku kaddib markii Muqdisho ay ku soo jabeen kumanaan qoys oo ku cayrtoobay abaaraha.
Recep Tayyip Erdogan, waxaa booqashada xeryahaasi kaddibna la-geeyey dhismaha safaaraddii Turkigu ku lahaa magaalada Muqdisho, waxaana uu haatan kulamo aqalka madaxtooyada kula leeyahay madaxda dawladda iyadoo si durugsan looga hadlayo arrimo badan oo quseeya xaaladaha kala duwan ee dalka sida ay noo xaqiijiyeen saraakiil madaxtooyo ahi.
Baahin: Axad, Aug 21, Weriye C/fitaax C. Geedi ~ Daljir ~ Galkacyo. Muqdisho ka bixitaankii Al-shabaab kadib; M/weyne Shariif oo ka hadlay is-badellada dhacay; Sugidda amniga ee Muqdisho Al-shabaab kadib; R/wasaare Gaas oo ka hadlay qorshaha dawlada; Waftigii Puntland ee booqanayey degmooyinka gobolka Bari oo ku soo laabtay Bossaso, kana xog warrmay la-kulamadoodii.
Shirkadda Africa Oil oo sheegtay in horumar laga gaaray shidaal soo saarka Puntland.